Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0613 lah
Ilay Mpaminany tsy mpankato (Jonà 1)
Alahady 05 May
Kely dia kely ny zavatra fantatsika momba an’i Jônà na ny fianakaviany. Ny 2 Mpanjaka 14:25 dia milaza fa nipetraka tany amin’ny faritra avaratra amin’ny tanin’ny Isiraely izy ary naminany nandritra ny taonjato fahavalo talohan’i Kristy. Milaza ihany koa io andalan-teny io fa naminany ny amin’ny hitaran’ny faritanin’ny fanjakan’ny Isiraely izy.
Raha ny tantara no jerena, dia iray amin’ireo tanàn-dehibe telo tany Asiria i Nineve, firenena manana ny maha-izy azy nanamorona ny renirano ‘Tigre’. Koa satria Tompon’ny firenena rehetra Andriamanitra ary ny olona rehetra tsy maintsy ampamoahina eo anatrehany (Amôsa 1­2), dia naniraka an’i Jônà mpanompony Izy mba hampitandrina an’i Ninive ny amin’ny fandringanana hihatra aminy tsy ho ela intsony. Ny baikon’Andriamanitra, araka izay voarakitra ao amin’ny Jônà 1:2, manao hoe: “Miantsoa ny amin'ny hamelezana azy,” dia azo adika ihany koa hoe “mitoria aminy.”
Fanta-daza ny habibian’ireo Asirianina. Taonjato iray taorian’i Jônà, dia izao no fiantson’i Nahoma an’i Ninive: “Lozan'ny tanàna mpandatsa-drà! Feno lainga sy fandozana izy” (Nah. 3:1). Nirahina mba hampita ny hafatr’Andriamanitra amin’olona tahaka izany i Jônà. Angamba tahotra ny Asirianina izay nankahalain’izy ireo [nankahalain’ny Hebreo] no anisan’ny antony nahatonga ny fihetsik’i Jônà. Rehefa nasain’ Andriamanitra handeha hiantsinanana ho any Ninive izy, dia nandà izany baiko izany ka nandray sambo nandositra niankandrefana ho any Tarsisy.
Tamin’ny voalohany dia toa nandeha tsara ny zavatra rehetra ho an’i Jônà. Avy eo anefa dia nandefa rivo-mahery hamely ilay sambo Andriamanitra mba hanomezany lesona ny mpanompony fa tsy misy olona afaka miafina ny tavany.
Nandositra an’ Andriamanitra i Jônà satria tsy te hanao ny sitrapon’ Andriamanitra izy. Ankehitriny ihany koa dia mahita antony maro ny olona handosirana an’ Andriamanitra. Ny sasany manao izany satria tsy mahafantatra Azy amin’ny fomba manokana izy. Misy ihany koa ireo izay mandà hatramin’ny fisiany sy ny Teniny; miovaova foana ny hevitr’izy ireo fa ny tena antony dia satria tsy te hahatsiaro tena ho meloka izy noho ny fomba fiainany tsy mendrika. Raha tsy misy tokoa moa fahefana ambony indrindra izay anaovana tatitry ny zava-bita, nahoana no tsy hanao izay tianao hatao ianao? Misy aza moa Kristianina minia manalavitra an’ Andriamanitra rehefa antsoiny hanao zavatra tsy tian’izy ireo hatao, dia zavatra izay mifanohitra amin’ny fitiavan-tena ao anatiny sy ny toetra maha-mpanota azy.
Vakio ny Sal. 139:1–12. Inona no hafatra fototra ho antsika eto? Fihetseham-po manao ahoana no aterak’izany fahamarinana lehibe izany ao aminao? Na jereo amin’izao lafiny izao koa izany: Mino isika fa tsy hoe mahita ny zava-drehetra fotsiny Andriamanitra fa mahalala hatramin’ny eritreritsika koa Izy. Moa miaina ao anatin’izany fahatsapana izany ve isika, sa ezahintsika vonoina tsy ho ao an-tsaintsika izany? Sa koa, efa mahazatra antsika loatra izany foto-kevitra izany ka efa tsy misy lanjany amintsika intsony? Na inona na inona mety ho antony, ho hafa manao ahoana ny fihetsikao raha tsapanao mandrakariva fa mahafantatra ny hevitsika rehetra Andriamanitra?